एस.एल.सी उ बेला
Technology Today. (Image google)
सन्धिखर्क गएर एस.एल.सी देको हाम्ले त...
रिजल्ट् आउने दिन तम्घासको लाकुरीको रुख मुनिको सार्बजनिक टेलिफोन बुथमा लाइन बसेर काठमाडौँ फोन गरेको ... थाहा पाउन...
कत्ति न काठमाडौँ बस्नेलाई जम्मै थाहा हुने जस्तो... लाग्ने नै तेस्तै ...
फोन गर्दा हात कामेका... अरु लाइन फोन को टावरको त हड्डी मात्रै बाकी.. गुदी सबै भाइरस लाको ... परिस्तिथिनै तेस्तै ...
मोबाइल त काठमाडौँका धनि मान्छे को मा मात्र हुन्थ्यो रे... सुनेकै तेस्तै...
नेपाल र बंगलादेश को सार्क फूटबल फाइनल हेर्न देउराली पुग्थ्यौ ... जमानै तेस्तै ...
अहिले का नानि बाबुहरुलाई संसार हेर्न देउराली पुग्न पर्दैन , फोन बाटै लप-सप पारेर कतिलाई हाल छ, कतिलाई बेहाल छ ! हामी संग अनुभूति धेरै छन्, पहिला समस्या थिए अहिले अनुभूति भए ! अहिले का नानीबाबु हरुसंग बिज्ञान धेरै छ , अनुभूति कम छ जुन आबस्यकता पनि हो!
बरदान vs . अविसाप ‪#‎SLC‬Result #SLC2061
Archived: june 11, 2013
"मेल्काम आदिस आमेत" भनेको Happy New Year रे
एथिओपियामा बोलिने अम्हारिक भाषा(राष्ट्रिय भाषा)को कुरा गरेको मैले। अस्ती देखी सम्झदै बिर्सदै गर्दा आजको दिन सम्म लगभग याद भयो। त्यो नि मोबाईलको मेमोमा लेखेर मात्रै। Widist ले एउटा थोत्रो कागजमा लेखेर द्या'थिई अस्ती क्लासमा। यिनिहरु र हाम्लाई विश्वले एउटै आँखाले हेर्ने भएर होला मलाई अलिक धेरै चाख लागेको यता तिर। ३-४ पटक गूगलअर्थमा हेर्या छुँ त्यहाँको राजधानी आदिसआबा तिर। ओरिपरीको डाँडाहरु हेर्दा पनि शिवपुरी लेक जस्तो। काठमाण्डुको एकापट्टी शिवपुरी राष्ट्रिय निकुन्ज भए जस्तै त्यहाँ नि रैछ राष्ट्रिय निकुन्ज। आज कार्यक्र्ममा देखाएको भिडियो हेर्दा पनि नेपाल सम्झिने धेरै कुराहरु पाइयो। बरेहुले त्यहाँको क-ख-ग हरु भन्या'थियो अलिक पहिला। २६ मध्ये १२-१५ वटा त एउटै हुँदारैछ्न। जसो जसो भएपनि त्यहाँको म्युजिक चै मलाई राम्रो लाग्छ। आफु classical गीत चाख मान्ने भएर होला।